နှလုံး သွေးကြောစနစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လူသား၏ နှလုံးသွေးကြောစနစ်ဖြစ်သည်။ အနီရောင်မှာ အောက်စီဂျင်ပါသည့်သွေးကြောနှင့် အပြာရောင်မှာ အောက်စီဂျင်မပါသည့်သွေးကြော
နှလုံး သွေးကြောစနစ်(Cardiovascular System or Circulatory system) တွင် နှလုံးနှင့် သွေးကြောများ(Blood vessels) (မိုင်ပေါင်း ထောင်ချီသည်) ပါဝင်သည်။
၁.၁ နှလုံး၏အဆို့ရှင်များ(Valves of the Heart)
၁.၂ နှလုံးအတွင်း သွေးလှည့်လည်ပုံ
၁.၃ နှလုံးခုံနှုန်း(Heart Rate)
Blood vessels သွေးကြော အမျိုးအစားများမှာ -
၁) Arteries။ ။ သွေးလွှတ်ကြောများ၊ နှလုံးမှ သန့်သည့်သွေးများအား တကိုယ်လုံးသို့ ပို့လွှတ်ပေးသည်။ Aorta (အေအိုတာ) သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နှလုံးမှထွက်သည်။ (အေအိုတာ) မှ ထွက်သော သွေးလွှတ်ကြောများမှာ Carotid artery သည် ဦးခေါင်းပိုင်းသို့ သွားသည်။ Subclavian artery သည် လက်များသို့ သွားသည်။ Celiac trunk သည် Stomach အစာအိမ်၊ Liver အသဲ။ Spleen (ဘေလုံး)၊ Duodenum (ဒူယိုဒီနမ်) အူသိမ်အစပိုင်း၊ Pancreas (သရက်ရွက်) သို့ သွားသည်။ Mesenteric arteries သည် အစာလမ်းကြာင်း အလယ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းသွားသည်။ Renal artery သည် ကျောက်ကပ်သို့သွားသည်။ Iliac artery သည် အစာဟောင်းလမ်းသို့ သွားသည်။
(၂) Arterioles။ ။ သွေးလွှတ်ကြောမျှင်များ၊
(၃) Veins။ ။ သွေးပြန်ကြောများ၊ တကိုယ်လုံးမှ သွေးဟောင်းများသည် နှလုံးသို့ပြန်လာကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အပြင်ပိုင်းမှာ မြင်နိုင်သည်။ IV ဆေးထိုးရာတွင် ၎င်းအကြောထဲထိုးရသည်။ သွေးယိုလျှင် ပန်းထွက်ခြင်းမရှိ။
(၄) Venules။ ။ သွေးပြန်ကြောမျှင်များ၊
(၅) Capillaries။ ။ သွေးကြောမျှင်များ၊ Venules သွေးပြန်ကြောမျှင်များနှင့် Arterioles သွေးလွှတ်ကြောမျှင်များ အား ဆက်ထားသည်။
Heart။ ။ နှလုံး၊ ကြွက်သားဖြင့်လုပ်ထားသည့် (ပန့်မ်)စုတ်ထုတ်စက်ဖြစ်သည်။ (တစ်ရှူး)များဆီသို့ရောက်အောင် ဖိအားသုံး၍ လွှတ်ထုတ်ပေးသည်။ အသက်ရှင်နေရန် အဓိကကြသည်။ ပုံမှန်လူတယောက်၌ သွေး (၅)လီတာ ရှိသည်။ နှလုံးသည် လက်သီးဆုပ်အရွယ်ရှိသည်။ နှလုံးသည် တနေ့လျင် အကြိမ် ၁ဝ၃၆၈၀ ခုန်နေသည်။ ၂/၃ သည် ဘယ်ဘက်ခြမ်း၌ရှိသည်။ Pericardial sac (ပယ်ဒီကာဒီရယ်-ဆက်) ဖြင့် အုပ်ထားသည်။ ကြွက်သား (၃) ထပ်ရှိသည်။ အခန်း (၄) ခန်းရှိသည်။
1.	Right atrium ညာဘက် အထက်ခန်း အေထွီယမ်၊
2.	Right ventricle ညာဘက် အောက်ခန်း ဗင်ထွီကယ်လ်၊
3.	Left atrium ဘယ်ဘက် အထက်ခန်း အေထွီယမ်၊
4.	Left ventricle ဘယ်ဘက် အောက်ခန်း ဗင်ထွီကယ်လ်၊
(အေထွီယမ်) တို့၏ နံရံသည် ပါးသည်။ သွေးပြန်ကြောများကလာသည့် သွေးတို့အား လက်ခံယူသည်။ ထို့နောက် ထူသည့် နံရံရှိသော (ဗင်ထွီကယ်လ်)များဆီ သွေးများရောက်သွားပြီး၊ တကိုယ်လုံးသို့ ညှစ်ထုတ်ပေးသည်။ ညာဘက် (အေထွီယမ်) က တကိုယ်လုံးမှလာသော သွေးဟောင်းများ လက်ခံပြီး၊ ဘယ်ဘက် (အေထွီယမ်)က အဆုပ်မှလာသည့် အောက်စီဂျင် ပါသည့် သွေးများကို လက်ခံယူသည်။ ညာဘက်(ဗင်ထွီကယ်လ်)မှ ညှစ်ထုတ်လျှင် သွေးများသည် အဆုပ်များထဲ ရောက်သွားသည်။ ဘယ်ဘက် (ဗင်ထွီကယ်လ်)က ညှစ်ထုတ်လျှင် သွေးများသည် တကိုယ်လုံးသို့ ရောက်သွားသည်။
နှလုံး၏အဆို့ရှင်များ(Valves of the Heart)[ပြင်ဆင်ရန်]
နှလုံးတွင် သွေးများအား လိုအပ်သည့် အရပ်မျက်နှာဆီသို့သာသွားစေရန်အတွက် Valves အဆို့ရှင်များရှိသည်။ နှလုံး၏ (အေထွီယမ်) အထက်ခန်းနှင့် (ဗင်ထွီကယ်လ်) အောက်ခန်းများအကြားတွင် Atrioventricular valves (Cuspid valves) အဆို့ရှင်များ၊ ကြီးမားသည့်သွေးကြောများ၏အဝ၌ Tricuspid valve အဆို့ရှင်များရှိသည်။ ညာဘက်အထက်ခန်းနှင့် ညာဘက်အောက်ခန်းများ အကြားရှိ အဆို့ရှင်သည် Bicuspid or Mitral ခွက်ပုံ သုံးခုပါသည်။ ဘယ်ဘက်အထက်ခန်း နှင့် ဘယ်ဘက်အောက်ခန်းများ အကြားရှိသော အဆို့ရှင်သည် semilunar valve ခွက်ပုံ နှစ်ခုပါသည်။ ဘယ်ဘက် အောက်ခန်းနှင့် သွေးလွှတ်ကြောမကြီး (အေရိုတာ)၏အဝ၌ Semilunar valve လခြမ်းပုံ နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ညာဘက် အောက်ခန်းနှင့် အဆုပ်ကြား၌လည်း Semilunar valve လခြမ်းပုံ နှစ်ခုဖြစ်သည်။
နှလုံးသည် စုတ်ထုတ်စက် နှစ်ခု (ညာဘက်-ဘယ်ဘက်) အသွင်ဖြစ်သည်။ အထက်ခန်းများနှင့် အောက်ခန်းများသည် သွေးကို တပြိုင်နက်တည်း ညှစ်ထုတ်ကြသည်။ ညာဘက် အထက်ခန်းမှ ညာဘက် အောက်ခန်းသို့လည်းကောင်း၊ ညာဘက် အောက်ခန်းမှ အဆုပ်ထဲသို့လည်းကောင်း၊ အဆုပ်ထဲတွင် အောက်စီဂျင် ရယူပြီးသား သွေးများသည် ဘယ်ဘက် အထက်ခန်းသို့ ဝင်လာပြီးနောက် ဘယ်ဘက်အောက်ခန်းသို့သွားသည်။ ထို့နောက် ဘယ်ဘက် အောက်ခန်းမှ ညှစ်ထုတ်သောသွေးများအား သွေးလွှတ်ကြောစနစ်ထဲသို့ ညှစ်ထုတ်သည်။
Myocardium ခေါ် နှလုံး၏ကြွက်သားများအတွက်လည်း အောက်စီဂျင်ပါသည့်သွေးလိုအပ်သည်။ ၎င်းသွေးကြောများကို Right and Left Coronary arteries ညာဘက်-ဘယ်ဘက် (ကိုရိုနရီ) သွေးကြောများဟုခေါ်သည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ ဆိုသည်မှာ ၎င်းသွေးကြောများ ကျဉ်းခြင်းဖြစ်သည်။
နှလုံးအလုပ်လုပ်ရန် နှလုံးကြွက်သားများအား Contraction ညှစ်ခြင်းနှင့် Relaxation လျော့ခြင်းတို့ စနစ်တကျလုပ်သည်။ ထိုအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် Conduction System လျှပ်စစ်ဓာတ် စီးဆင်းမှုစနစ် ရှိသည်။ နှလုံးမှသွေးများကို ထိရောက်စွာ ညှစ်ထုတ်နိုင်ရန် ဖြစ်စဉ်တခုအတွက် တိကျစွာ ထိန်းညှိမှုရှိသည်။ ယင်းအလုပ်ကို Sinoatrial node ကလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းက တမိနစ်လျင် ၇ဝ-၈ဝ နှုန်း စီးချက်ကျကျ လုပ်ပေးသည်။ Heart rate (Pulse rate) = 70-80/minute
နှလုံး၏ ညှစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လျော့ပေးခြင်း အလုပ်နှစ်မျိုး ပါဝင်သည့် ဖြစ်စဉ်တခုအား Cardiac Cycle ဟု ခေါ်သည်။ ညှစ်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ကို Systolic phase ဟုလည်းကောင်း၊ ပြန်လျော့ပေးခြင်းအဆင့်ကို Diastolic phase ဟုလည်းကောင်း ခေါ်သည်။ ထို ဖြစ်စဉ်တပါတ်သည် (ဝ.ဂ) စက္ကန့် ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးဖိအား (Blood preassure) တိုင်းသည့်အခါ အထက်သွေးချိန် ကို Systolic Pressure ဟုလည်းကောင်း၊ အောက်သွေးချိန်ကို Diastolic pressure ဟု လည်းကောင်းခေါ်သည်။
BP = 110/80 mmHg
Sino-atrial node က အဆက်မပြတ်၊ စီးချက်ကျကျဖြင့် နှလုံးကိုခုန်စေသည်။ ပြောင်းလဲနေသော ခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်သည့် သွေးပမာဏရစေရန် အနှေးအမြန်ပြောင်းနေသည်။ ယင်းကို Medulla Oblongata ခေါ် ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်းတခုက ထိန်းပေးသည်။ ပုံမှန် နှလုံခုန်နှုန်သည် ၁ မိနစ်လျင် ၆၀ မှ ၁၀၀ (60-100 bpm) ရှိသည်။ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော အားကစားသမား၏ နှလုံးခုန်နှုန်းသည် ၄၀-၆၀ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှလုံး_သွေးကြောစနစ်&oldid=704793" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။